Archive du 07-juin-2022
Fakana an-keriny tato ho ato Tsy vola fa zavatra hafa no antony
Nivahiny tao amin’ny fahitalavi-panjakana TVM ny mpikamban’ny governemanta telo omaly, dia ny minisitry ny fahasalamana, minisitry filaminam-bahoaka, ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria (SEG) niresaka sy nanao tatitra momba ny raharaha fakana an-keriny hafahafa sy ny zavatra natao tamin’ireo lasibatra.
Halatra sy fanambakana
Tontolona halatra sy fanambakana, izay ankehitriny no azo hamintinana ny ankapoben’ny tontolo iainana eto amin’ity Madagasikara ity. Ankapobeny moa satria soa ihany fa mbola misy ireo fiarahamonina ambanivohitra maro mbola hita
Ambatovy Miara-miasa amina orinasa 400
Orinasa goavana eo amin’ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany, fantatra amin’ny fitrandrahana nikela sy kobalta i Ambatovy.
BAREA Mila mandresy in-telo amin’ny lalao efatra
Faharesena iray, ary ady sahala iray! Io aloha no vokatra azon’ny Barean’i Madagasikara tamin’ireo lalao roa amin’ny fifanintsanan’ny CAN 2023 hatao any Côte d’Ivoire. Nisaraka 1-1 nanoloana ny Palancas Negras ekipam-pirenena
Dahalo narovana amin’ny fitsaram-bahoaka Nitsoaka ka maty voatifitra ihany ny farany
Ny alin'ny 30 hifoha 31 mey lasa teo, tany ho any amin'ny misasakalina, niantso "Vonjeo" ramatoa Dadie, monina ao Antsirabe-Afovoany, distrikan’i Mandritsara, satria nisy olon-dratsy namaky sy niditra an-keriny ny tranony,
Fanolanana etsy sy eroa Matetika tsy sahy mitory ireo ray aman-dreny
Ankoatra ny tsy fandriampahalemana dia mirongatra ihany koa ny fanolanana ao Vohemar. Zazavavy kely iray vao 04 taona monja no voaholana ny faran’ny herinandro teo, tao amin’ny fokontany Ambatojoby Manambery.
Tsy ekena ny tsindry politika Lavin’ny FFKM marindrano ilay fanalan-jaza “ITG”
Nanamafy ny fitsipahany marin-drano ny volavolan-dalàna momba ny ITG (Interruption Thérapeutique de la Grossesse)
Coronavirus Tena miakatra hatrany ny isa
Miakatra ny isan’ny trangana coronavirus eto Madagasikara na ekena aza fa kely mitaha ny tranga tamin’ny vanim-potoana nampahery vaika azy.
Roa taona aty aoriana Misy fahasimbana sahady ireo fiaran’ny Covid 19
2 taona lasa mahery kely izay no niteraka resabe ny fisian’ny soratra manao “Don Andry Rajoelina” tamin’ireo fiara natolotra hanampiana amin’ny ady atao amin’ny aretina Covid 19 teto Madagasikara.
Telo taona nitantanan-dRajoelina Nitombo 7% ny tahan’ny Malagasy mahantra
Tsy mitsahatra mitombo ny tahan’ny fahantrana eto Madagasikara, ary tafiakatra ambony indrindra tsy mbola nisy tao anatin’ny 60 taona izany tao anatin’izao fitondrana Rajoelina izao.
Vondron’olona ifotony miisa 5 Nanavao fifanarahana 10 taona amin’Ambatovy
Vondron’olona Ifotony (VOI) miisa 5 eny amin’ny manodidina ny toeram-pitrandrahan’Ambatovy ao Moramanga izay nisitraka tohana teo amin’ny lafiny maro avy amin’Ambatovy no nanavao ho 10 taona ny fifanarahana fitantanana
Mpitandrina Tiana Alisoa Ranaivoniarivo Hampahafantatra ny zava-miafin’ireo fakana an-keriny
Anio talata no fotoana hanasan’ny mpitandrina Tiana Alisoa Ranaivoniarivo izay mpitondra fivavahana etsy amin’ny FJKM Atsimon’i Mahamasina ao amin’ity fitandremany ity ireo izay
Boky vaovaon’i Jean Razafindambo Niainga tamin’ny zava-misy ny « Absurdistan »
Azo jifaina amin’ny vola Ariary manomboka ny 10 jona izao ny boky vaovao nosoratan’i Jean Razafindambo mitondra ny lohateny hoe « L'Absurdistan? Ici l'enfer 261! ».
Alatsinain’ny pentekosta Nahitana taratra ny fahasahiranan’ny olona
Toy ny andro fakan’aina fotsiny ihany ny andron’ny omaly alatsinain’ny Pentekosta ho an’ny teto an-drenivohitra sy ny manodidina. Tsy dia nahitana olona firy toy ny tamin’ny fetin’ny paska mantsy teny amin’ireo toerana be olona toy ny mahazatra.
ANDEKALEKA Manomboka mamokatra ilay milina G1
Efa manomboka mamokatra ilay milina G1 ao Andekaleka raha araka ny fanazavana azo teo anivon’ny JIRAMA hahafahana miady amin’ny delestazy. T
Faneva Ima Nidera manokana an’i Mamy Gérvais sy Paulin
Nomen’i Faneva Ima Kapitenin’ny Barean’i Madagasikara teo aloha toraka voninkazo manokana ireo mpilalao mirahalahy isan’ny efa tranainy ao anatin’ny Ekipam-pirenena taorian’ny lalao nifanandrinana tamin’i Angola tetsy
Tsy nisorona ny Fiangonana Tena mahantra sy sahirana ny vahoaka
Ankoatra, naneho ny Fiangonana fa anaty fahasahiranana sy ady ny vahoaka Malagasy. Eo ny coronavirus izay mbola tsy nifarana ary ambaran’izy ireo fa mitady hirongatra indray aza raha tsy ampy ny fitandremantsika.
Antananarivo Renivohitra Zaraina fanampin-tsakafo misy otrikaina ireo mpanala CEPE
Herinandro roa eo ho eo sisa dia higadona ny datin’ny 21 jona hanatanterahan’ireo kilonga madinika ny fanadinam-panjakana CEPE, fanadinana voalohany eo amin’ny fiainan’ny zanak’olombelona.
Antoko « Humaniste et écologiste » “Hirotsaka izahay na maloto aza ny fifidianana”
Nilaza hirotsaka sy handray anjara amin’ny fifidianana manaraka (filohampirenena, ben’ny tanàna ary Mpanolotsain’ny tanàna) ny antoko Hasin’ny olombelona sy ny Ekolojia
Distrikan’ny Vohemar Ho tsaraina anio ilay raharaha fanapahan-doha zazavavy
Tsy mandry fahalemana ny any amin’ny distrikan’i Vohemar. Zazavavy kely vao 8 taona monja no hita faty tao anaty kirihitr’ala ny Sabotsy lasa teo, 05 km atsinanan’ny tananan’ Ambalahasy, fokontany Ampizahamatana.